ရုသကျမ်း, သမ္မာကျမ်းစာ မှစ. တစ်ဦးပုံပြင်
by စင်သီယာ Astle
ရုသအဆိုပါစာအုပ်ဂျူးမိသားစုသို့လက်ထပ်နှင့်တစ်ဦးဘိုးဘေးဖွစျလာသူ non-ဂျူးအမျိုးသမီးတစ်ဦးအကြောင်းကိုဓမ္မဟောင်းကျမ်း (ဟီဘရူးသမ်မာကမျြး) မှတစ်ဦးစိတ်ဝင်စားဖွယ်တိုတောင်းသောဇာတ်လမ်းဖြစ်ပါတယ် ဒါဝိဒ်သည် နှင့် သညျယရှေု ။
ရုသရဲ့စာအုပ်ပဲလေးအခန်းကြီးအတွက်၎င်း၏ဇာတ်လမ်းကိုပြောပြ, သမ္မာကျမ်းစာရဲ့အတိုဆုံးစာအုပ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်း၏အဓိကဇာတ်ကောင်အမည်ရှိ Moabite မိန်းမတယောက်သည် ရုသကို , သတို့သမီး-In-ဥပဒနောမိအမည်ရှိဂျူးမုဆိုးမ။
ဒါဟာဥပဒ်, kinship ဆက်ဆံရေးလိမ္မာသည် ဖြစ်. အသုံးပြုမှု, နောက်ဆုံးမှာ, သစ္စာရှိမှု၏ရငျးနှီးသညျ့မိသားစုပုံပြင်ပါပဲ။
ဇာတ်လမ်းကပတ်လည်စာအုပ်တွေမှာတွေ့ရှိသမိုင်းရဲ့ခမ်းနားမောင်းကွားဖွတျတစ်ခုထူးဆန်းအရပ်ဌာန၌ပြောသည်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤ "သမိုင်း" စာအုပ်ယောရှု, တရားသူကြီးမှတ်စာ, 1-2 ရှမွေလသည်, 1-2 ဓမ္မရာဇဝင်, 1-2 ရာဇဝင်, ဧဇရနှင့်နေဟမိပါဝင်သည်။ ထဲမှာထုတ်ဖော်ပြောဆိုသူတို့အားလုံးရှယ်ယာဘာသာရေးအခြေခံမူဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာ Deuteronomistic သမိုင်းကိုခေါ်နေ တရားဟောရာ၏စာအုပ် ။ အထူးသ, သူတို့သညျဘုရားသခငျ၏သားစဉ်မြေးဆက်နှင့်တိုက်ရိုက်, ရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးရှိခဲ့သည်သောစိတ်ကူးပေါ်အခြေခံပြီးနေ အာဗြဟံသည် , ယုဒလူတို့နှင့်ဣသရေလအမျိုးရဲ့သမိုင်းပုံဖော်တိုက်ရိုက်ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့သည်။ ရုသနဲ့နောမိ၏ Vignette မည်သို့အတွက် fit သနည်း?
ဟီးဘရူးသမ္မာကျမ်းစာရဲ့မူရင်းဗားရှင်း၌, ရာကျမ်း, ရုသရဲ့ပုံပြင်ရာဇဝင်, ဧဇရနှင့်နေဟမိနှင့်အတူ "ဟုရေးထားသောစာကို" (ဟီဘရူးအတွက် Ketuvim) ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ခေတ်ပြိုင်သမ္မာကျမ်းစာပညာရှင်များယခုကဲ့သို့သောစာအုပ်များခွဲခြားလေ့ "ဘာသာရေးနှင့် didactic သမိုင်း။ " တစ်နည်းအားဖြင့်ဤစာအုပ်တချို့ဒီဂရီမှသမိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်ရပ်များပြန်လည်တည်ဆောက်ရန်အတွက်, ဒါပေမဲ့သူတို့ဘာသာရေးညွှန်ကြားချက်များနှင့်လှုံ့ဆော်မှုများ၏ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်စိတ်ကူးယဉ်စာပေ devices များအားဖွငျ့သမိုင်းနဲ့ပြောပြပါ။
တစ်ဦးအစာခေါင်းပါးသောအခါစဉ်အတွင်းဧလိမအမည်ရှိသောသူတယောက်သည်အရှေ့ယုဒပြည်၌ရှိသောဗက်လင်မြို့၌၎င်းတို့၏နေအိမ်ထဲကနေမောဘပြည်ဟုခေါ်တွင်တိုင်းပြည်တစ်ပြည်မှ, သူ့ဇနီးနောမိနှင့်သူတို့၏သားနှစ်ယောက်, မဟာလုန်နှင့် Chilion ယူခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့အဖေရဲ့အသေခံပြီးနောက်အမြိုးသားတို့မောဘအမြိုးသမီးမြား, သြရပနှင့်ရုသသည်လက်ထပ်ခဲ့သည်။ မဟာလုန်နှင့် Chilion နှစ်ဦးစလုံးသေဆုံးသည်အထိသူတို့ကသူ၏သမီး-In-ဥပဒေနှင့်အသက်ရှင်ရန်သူတို့ရဲ့မိခင်နောမိထွက်ခွာခန့်က 10 နှစ်ကြာအတူတကွနေထိုင်ခဲ့တယ်။
မွတ်သိပ်ခြင်းဘေးယုဒပြည်၌အဆုံးသတ်ခဲ့ကြောင်းကြားနာ, နောမိအိမ်ပြန်ဖို့အတွက်ပြန်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်, သူမောဘပြည်ထဲမှာသူတို့ကိုယ်ပိုင်မိခင်များဖို့အတွက်ပြန်သွားဖို့သူ၏သမီး-In-ဥပဒတိုက်တွန်းခဲ့သည်။ အများကြီးအငြင်းပွားမှုပြီးနောက်သြရပသူမ၏မိခင်-In-ဥပဒရဲ့ဆန္ဒကိုမှ acceded နှင့်ငိုကြွေးခြင်း, သူမ၏ထားခဲ့တယ်။ (ရုသ 1:16 ";; ငါအိပ်မည်, သငျသညျအိပျရှိရာအကြှနျုပျ၏ဘုရားသခငျကိုယ်တော်၏လူလည်းငါ၏လူဖြစ်ရကြမည်, သင်၏ဘုရားသခင်သည်သင်သွားပါလိမ့်မယ် go အဘယ်မှာ": ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာကရုသနောမိထံသို့ပြန်သွားနှင့်သူမ၏ယခု-ကျော်ကြားစကားပြောပါတယ် ) ။
သူတို့ရောက်ရှိသည်နှင့်တပြိုင်နက် ဗက်လင်မြို့ , နောမိနှင့်ရုသပေါက်ဘော်တယောက်, ဗောဇ၏လယ်ပြင်ကနေစပါးကိုကောကျခွငျးအားဖွငျ့အစားအစာရှာ၏။ ဗောဇသည်ရုသကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်အစားအစာပူဇော်ကြ၏။ သူမတစ်ဦးနိုင်ငံခြားသား, ထိုကဲ့သို့သောကြင်နာမှုကိုလက်ခံရရှိသင့်ပါတယ်ဘာကြောင့်ရုသသည်ဟုမေးသောအခါ, ဗောဇသည်သူသူမ၏မိခင်-In-တရားရုသရဲ့သစ်စာရှိမှု၏လေ့လာသင်ယူခဲ့ကွောငျး replied, သူသည်ဣသရေလအမျိုး၏ဘုရားသခင်သူမ၏သစ္စာရှိမှုအတှကျအရုသသည်ကောင်းကြီးပေးတော်မူလိမ့်မည်ဟုဆုတောငျးလေ၏။
နောမိထို့နောက်သူနှင့်အတူသူမ၏ kinship သွန်းလောင်းပေးခြင်းဖြင့်ဗောဇသည်ရုသကိုလက်ထပ်ဖို့အကူအညီမ။ သူမသည်သူ့ကိုကိုယ်ကိုပူဇော်ဖို့ညဥ့်အချိန်တွင်ဗောဇသည်ရုသကိုစလှေတျတျောပေမယ်ဖြောင့်မတ်ဗောဇသည်သူမကို၏အားသာချက်ယူရန်ငြင်းဆိုခဲ့သည်။ အဲဒီအစားသူကရုသလက်ထပ်ထားတဲ့ပြီးနောက်, နောမိနှင့်ရုသအမွေဥစ္စာအချို့ကိုထုံးတမ်းညှိနှိုင်းရန်ကူညီပေးခဲ့သည်။ မကြာခင်မှာပဲသူတို့တစ်တွေပေါင်းစည်းဣသရေလရှင်ဘုရင်ဖွစျလာသူသည်ဒါဝိဒ်၏အဘ, သူသည်သားကိုယေရှဲ, ဖခင်သူတစ်ဦး၏သားဩဗဒေ, ရှိခဲ့ပါတယ်။
ရုသအဆိုပါစာအုပ်ဂျူးပါးစပ်အစဉ်အလာအတွက်ကောင်းစွာကစားခဲ့ကြလိမ့်မယ်လို့မြင့်မားတဲ့ဒရာမာဇာတ်ကားများ၏ကြင်နာဖြစ်ပါတယ်။ သစ္စာမိသားစုမောဘ၏ဂျူးမဟုတ်သောပြည်သို့ယုဒပြည်မှအစာခေါင်းပါးသောအခါမောင်းနှင်နေသည်။ သူတို့သား '' အမည်များကိုသူတို့၏ဒုက္ခအဘို့အဥပစာစကားများမှာ ( "မဟာလုန်" နည်းလမ်း "အနာရောဂါ" နှင့် "Chilion" ဟေဗြဲတွင် "ဖြုန်း" ကိုဆိုလိုသည်) ။
သူမ၏မိခင်-In-ပညတ်တရား၏တဦးတည်းမှန်သောဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏မှသူမ၏ fealty ဖြစ်သကဲ့သို့ရုသကနောမိကိုပြသသောသစ္စာရှိမှုကြွယ်ဝစွာ, ဆုခခြဲ့သည်။ ဖြစ်မဖြစ်ကိုသွေးပါ (တဲ့လက်ခဏာယုံကြည်ခြင်းတရားကိုမှဒုတိယဖြစ်ကြသည် ရာကျမ်း ဒုတိယ၏သားတို့သည်အကြိမ်ကြိမ်သူတို့ရဲ့အကြီးအကဲတစ်ဦးညီအစျကိုကူးသွားသင့်တယ်သောသားဦးအရာကိုအနိုင်ရရှိရာ,) ။ ရုသသည်ဣသရေလအမျိုး၏သူရဲကောင်းမင်းကြီး, ဒါဝိဒ်မင်း၏ကြီးမြတ်-အဖွားဖြစ်လာသည့်အခါ, တကနိုင်ငံခြားသားလုံးဝ assimilated နိုင်ပေမယ့်သူသို့မဟုတ်သူမအချို့မြင့်မားကောငျးကြိုးအတှကျဘုရားသခငျ၏အတူရိယာဖြစ်စေခြင်းငှါ, မသာဆိုလိုသည်။
အနည်းဆုံးအသှငျအပွငျ၌, ရုသအခြားသူများတစ်ဆုံးမသောအဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။ ဧဇရနှင့်နေဟမိယုဒလူတို့ကနိုင်ငံခြားမယားနှငျ့ကှာတောင်းဆို; ရုသသည်ဣသရေလအမျိုး၏ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းအမည်ခံသူကိုအပြင်လူအပြည့်အဝဂျူးလူ့အဖွဲ့အစည်းသို့ assimilated နိုင်ပြသထားတယ်။
ခရစ်ယာန်များအတွက်ရုသ်၏စာအုပ်ယရှေုသညျဘုရားသခငျ၏တစ်ဦးအစောပိုင်းပဲ့တင်သံဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဝိဒ်မင်း၏အိမ်မှ (နှင့်နောက်ဆုံးတွင်ရုသက) ယရှေုချိတ်ဆက်ခြင်းနာဇရက်မြို့သားခရစ်ယာန်ဘာသာစောစောပြောင်းလဲအကြားတစ်ဦးရှေိယ၏ imprimatur အပ်ပေးတော်မူ၏။ ဒါဝိဒ်သည်ဣသရေလအမျိုး၏အကြီးမြတ်ဆုံးသူရဲကောင်း, မိမိလက်ျာဘက်တစ်ရှေိယ (ဘုရားသခ-ကိုစလှေတျခေါင်းဆောင်) ဖြစ်ခဲ့သည်။ ယရှေုသညျယုဒလူတို့လွတ်မြောက်မည်ဟုသူမရှေိယဖွစျကွောငျးတောင်းဆိုမှုများ '' သည်သူ၏မွေးစားဖခင်မှတဆင့်မယ်တော်မာရိနှင့်ဥပဒေရေးရာ kinship မှတဆင့်နှစ်ဦးစလုံးသွေးထဲမှာဒါဝိဒ်၏မိသားစုထံမှနွယ်ယောသပ်သည်သူ၏နောက်လိုက်မှယုံထုတ်ချေး '' ။ ထို့ကြောင့်ခရစ်ယာန်များအတွက်ရုသ၏ကျမ်းဂန်မေရှိယကိုတစ်ခုတည်းကိုသာယုဒလူတို့လူသားအပေါငျးတို့သမရလွတ်မြောက်ရန်မယ်လို့အစောပိုင်းနိမိတ်လက္ခဏာကိုကိုယ်စားပြုတယ်။
ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း၏7အထောက်အထား
ဂလာတိ 6: သမ်မာကမျြးအခနျးအကျဉ်းချုပ်
သမ်မာကမျြးပုံပြင်အကျဉ်းချုပ် - ယရှေုသညျအပွစျရှိသောအမျိုးသမီးအားဖြင့်ဘိသိက်ခံသော
သဟဇာတမဖြစ်သောသို့မဟုတ်အခြားအပြုအမူများ differential စစ်ကူ
Santa Clara GPA, SAT နှင့် ACT ဒေတာများ
အပြစ်ရှိ - ပျော်စရာစာသင်ခန်း, Conversation ဂိမ်း
စာရင်းဝင် Databases အတွက်သင်၏ဘိုးဘေးရှာဖွေခြင်းတို့အတွက်သိကောင်းစရာများ
Divots Repair လုပ်နည်း
ထိပ်တန်း 10 Twee အယ်လ်ဘန်
အဆိုပါဦးနှောက်ထဲမှာ Wernicke ရဲ့ဧရိယာ
ထိပ်တန်းဂျိမ်း Madison ဘာသာတရားအပေါ်ကိုးကား
1812 ၏စစ်ပွဲအတွင်းဗိုလ်မှူးချုပ်ဣဇာက်ကို Hull
မကောင်းပါအမျိုးသားများအတွက် မှစ. Breaking အခမဲ့အကြောင်းဆယ်ပါးဂန္ထဝင်သီချင်းများ
လှေအကြောင်းထိပ်တန်း 10 နိုင်ငံသီချင်းများ
အခမဲ့ MCSE အလေ့အကျင့်စမ်းသပ်ခြင်း
သင့်ရဲ့ Yule ယဇ်ပလ္လင် Up ကိုချိန်ညှိခြင်း
အဘယ်အရာကိုဂေါက်သီးရိုက်ဒုတ်က Tiger Woods ကိုအသုံးပြုခြင်းပါသလား
သင့်ရဲ့အဖေကဒီဖခင်များနေ့နှင့်အတူမျှဝေပါရန် 13 Quotes